Sekuqiniswe uphenyo ngokugqekezwa kwamahhovisi eNhloko yamaJaji | News24
Sekuqiniswe uphenyo ngokugqekezwa kwamahhovisi eNhloko yamaJaji
Johannesburg - Amaphoyisa aseqinise uphenyo kulandela ukwebiwa kwama-computer angu-15 emahhovisi eNhloko yamaJaji eMidrand, enyakatho yeGoli, nokwenzeke ngemuva kokuba iNkantolo yoMthethosisekelo ikhiphe isinqumo ngodaba lakwa-Sassa.
Ama-computer angu-15, naqukethe imininingwane ebucayi ngamajaji aseNingizimu Afrika, ebiwe ngesikhathi kugqekezwa ngempelasonto. Amaphoyisa athi asesungule ithimba elizokwenza uphenyo kodwa bekungakaboshwa muntu ngesigameko.
IPhalamende selinxuse amaphoyisa ukuba angashiyi lutho ngaphandle uma enza uphenyo ukuze labo abathintekayo bezobhekana nengalo yomthetho.
OLUNYE UDABA: Ubuyela enkantolo umfundisi weDoom
Okhulumela iPhalamende uMoloto Mothapo uthi lesi sigameko sisho ukuhlaselwa kwentando yabantu eNingizimu Afrika.
Khonamanjalo, iDemocratic Alliance (DA) ithi kuyasolisa ukuthi kungagqekezwa emahhovisi enhloko yamajaji ngalesi sikhathi [kade kuphuma isinqumo ngodaba lakwa-Sassa].
Isinqumo senkantolo sagxeka kakhulu uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi , uBathabile Dlamini.